အမဲသားသုပ် – Thet Nandar
Posted on March 4, 2012 July 3, 2014 by Thet Nandar
အမဲသားသုပ် – ချဉ်၊ ငံ၊ စပ်
၀က်နံရိုး နှင့် မုန်လာဥဖြူ ဟင်းရည်
**** ချက်၊ စားနည်း ****
အမဲသားကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ဆနွင်းမှုန့် နဲ့ နှယ်ပီး … ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင် နဲ့ အိုးပူတိုက် … အသားလေးမြုပ်ရုံ ရေထည့်ပီး ရေခမ်း ပြုပ်ထားသော အမဲသားပြုပ် ….
စပါးလင် နှင့် ပြုပ်ပီး ပါးပါးလှီးထားသော အမဲသား ၊ ကြက်သွန်နီ၊ နံနံပင်၊ သံပုရာသီး၊ ပူစီနံ၊ ကုလားပဲ အကျက်မှုန့်၊ ငရုတ်သီး အကျက်မှုန့်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ဆီချက် ၊ ကြက်သွန်နီကြော်၊ ဆား၊ ငံပြာရည်၊ ဟင်းခတ်မှုန့် နှင့် သုပ်ထားသော အမဲသားသုပ် …
ချဉ်၊ ငံ၊ စပ် သုပ်ပီး ကြက်သွန်နီကြော် ဖြူးထားသော ပူစီနံ အမဲသားသုပ်
၀က်နံရိုးကို ဆား၊ သကြား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် အကြည်၊ ပဲငံပြာရည် အနောက် နှင့် နှပ်ထားပီး မှ … oven မှာ 350º F နှင့် ကင်ထားသော ၀က်နံရိုးကင် …
၀က်နံရိုးကို ဆား၊ ဟင်းခတ်မှုန့်၊ နဲ့ နှယ်ပီး ဓါးပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်းတို့ နှင့် အိုးပူတိုက်ပီးမှ ၃ ရေလောက် ပြုပ်ပီး နောက်ဆုံးတရေမှ မုန်လာဥဖြူ ထည့်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် ခတ်ထားသော ဟင်းရည် …
2 thoughts on “အမဲသားသုပ်”
all look so good !
Aye Mya Nyunt
Aye Mya Nyunt …
Thanks, Ma Aye Mya Nyunt !